Teny miteny amin'ny nosy Karaiba
Inona avy ny fiteny any Karaiba?
Raha mitsidika an'i Karaiba ianao ary miteny Anglisy dia manana loka ianao: ny teny anglisy dia fiteny voalohany na faharoa amin'ny ankamaroan'ny faritra any Karaiba ary ny "fiteny fizahan-tany tsy ofisialy" koa. Na izany aza, dia matetika ianao no mahita fa ny dia ho avy dia hahita valisoa bebe kokoa raha afaka miresaka amin'ny mponina amin'ny fitenin-drazany ianao. Any amin'ny tany Karaiba, izany dia matetika no mamaritra ny hery amam-pahefana-Angletera, Frantsa, Espaina, na Hollande-izay nitazona ilay nosy aloha na ela indrindra.
Ny Anglisy voalohany dia nanorina fisiana tany Karaiba tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-16, ary tamin'ny 1612 dia nanjanaka an'i Bermudes. Tamin'ny farany dia hitombo ny British West Indies mba ho lasa nosy lehibe indrindra manerana ny sainam-pirenena iray. Tamin'ny taonjato faha-20, maro tamin'ireo zanatany taloha ireo no nahazo ny fahaleovan-tenany, ary vitsy ihany no nitoetra tany amin'ny faritany Britanika. Ny Anglisy dia hijanona ho fiteny manan-danja indrindra any Anguilla , Bahamas , Bermudes , Nosy Cayman, Nosy Virijiny Britanika , Antigua sy Barbuda , Dominica , Barbados , Grenada , Trinidad sy Tobago , Jamaika , Saint Kitts sy Nevis , Saint Vincent sy Grenadines , Montserrat , St. Lucia , ary ny Tiorka sy Caicos . Misaotra an'ireo mpanjanaka teo aloha Anglisy tany Etazonia, ny Anglisy koa dia voatanisa ao amin'ny Nosy Virijin'i Etazonia sy ny Florida Keys.
Nohatsarain'ny Mpanjakan'i Espaina, ilay Christopher Columbus, mpandihin'i Italiana, dia nalaza "malaza" tamin'ny Tontolo Vaovao tamin'ny taona 1492, rehefa tonga tany amin'ny nosy Hispaniola, any amin'ny Repoblika Dominikanina amin'izao fotoana izao.
Maro amin'ireo nosy nandresy an'i Espaina, anisan'izany i Puerto Rico sy Kiobà, no mijanona teny Espaniôla, na dia tsy Jamaika sy Trinidad aza, izay nosamborin'ny Anglisy tatỳ aoriana. Ny firenena miteny Espaniôla any Karaiba dia an'i Kiobà , Repoblika Dominikanina , Mexique, Puerto Rico ary Amerika Afovoany.
Ny kolontsaina Frantsay voalohany tany Karaiba dia Martinique, naorina tamin'ny taona 1635, ary niaraka tamin'i Guadeloupe, dia mbola "departemantany", na fanjakana, an'i Frantsa hatramin'izao. Anisan'ny Frantsay Andrefana ny Guadeloupe miteny frantsay, Martinique , St. Barts , ary St. Martin ; Ny Frantsay koa dia voatanisa ao Haiti , ny zanatany frantsay taloha tao Saint-Domingue. Mahaliana fa hahita creole iray ianao eto an-tany (any ambany) any Dominica sy St. Lucia, na dia teny Anglisy amin'ny nosy roa aza ny fiteny ofisialy: toy ny tranga matetika, ireo tanana ireo dia nanova tanana imbetsaka ady ho an'ny Karaiba eo amin'ny teny Anglisy, Frantsay, Espaniôla, Holandey ary ny hafa.
Azonao atao ihany koa ny mihaino ny holatra holandey niresaka tamin'ny nosy Saint Marten, Aruba , Curacao , Bonaire , Saba , ary St. Eustatius , izay napetraky ny Holandey ary mbola mihazona fifandraisana akaiky amin'ny Fanjakana any Holandy. Na izany aza, ny teny Anglisy dia miresaka betsaka amin'ireo nosy ireo androany, miaraka amin'ny teny Espaniôla (vokatry ny akaiky an'i Aruba, Bonaire, ary Curacao amin'ny sisintany Espaniola Venezoeliana).
Ankoatr'izay, saika ny nosy Karaiba rehetra dia manana patois na kreôla ao an-toerana izay ampiasain'ny mponina ao an-toerana voalohany amin'ny fifampiresahana.
Ao amin'ny Caribbean Holanda, ohatra, antsoina hoe papiamento io fiteny io. Tsy mahagaga raha mifampiresaka ireo mponin'ny nosy amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha haingana izay tsy azo ekena amin'ny sofin'ny tsy fantatra, avy eo dia miverena ary adikao amin'ny mpitsidika amin'ny teny anglisy tsara tarehy!
Ny fiteny kreôla dia miovaova be avy amin'ny nosy mankany amin'ny nosy: ny sasany, mampiditra ny teny frantsay amin'ny teny bitika afrikanina na teratany Taino; Ny hafa kosa manana ny Anglisy, Holandey, na Frantsay, miankina amin'ny zava-nitranga tamin'ny fandresena ny nosy. Any Karaiba, ny fiteny kreôla any Jamaika sy Haïti dia heverina fa tsy mitovy amin'ny an'ny Antillean kreôla, izay tsy misy lanjany mihoatra ny St. Lucia, Martinique, Dominica, Guadeloupe, St. Martin, Saint Barts, Trinidad & Tobago , Belize, ary Guyane frantsay. Any Guadeloupe sy Trinidad, ianao dia haheno koa ireo teny avy amin'ny fiteny Aziatika Atsimo-India, Sinoa, Tamil, ary Libane mihitsy aza - noho ireo mpifindra monina avy amin'ireo firenena izay nahatonga ny fisian'izy ireo ho fantatra amin'ny endriny ihany koa.
Antigua sy Barbuda Travel Guide
Fitsangatsanganana ho any an-tokantrano momba ny: Mitety ny biby fiompy any Karaiba
Nahoana no tokony hijerena ny fitsinjarana fitsangantsanganana ny mpizaha tany Karaiba?
Hitady ny Pirates tena izy any Karaiba
Torohevitra isam-bolana ho an'ny hetsika Karibeana, Fetibe, Koncerts ary bebe kokoa
Ankizy mahafinaritra indrindra nahafinaritra tao New York City
New York amin'ny teti-bola - Sehatr'asa
Torolalana manan-danja amin'ny karazana Visa Indiana
Sarintanin'i Tsim Sha Tsui any Hong Kong
5 amin'ireo Park RV tsara indrindra any avaratr'i Meksika
Ny Guide vezariana ho an'ny Epcot
Ny fomba hitsidihana an'i Lombard Street ny lalana tsara
Mafana ao Arizona. Ahoana ny hafanana? Tena mahafinaritra izany ...
Toeram-ponenana ho an'ny Antokom-pankaton'ny ankizy any Akron
Ahoana no hialana amin'ny ranomaso mankany Gatwick: The Complete Guide
Sary nalain'i Antarctica momba ny Nosy Elephant
Topy Day Valentines Chocolates
Torolalana ho an'ny Arsevekoly fahatelo any Paris